‘साईली’को पहिलो गीत सार्बजनिक, गौरभ र मेनुकाको बिहेमा को को नाचे ? (भिडियो सहित) - Purbeli News
‘साईली’को पहिलो गीत सार्बजनिक, गौरभ र मेनुकाको बिहेमा को को नाचे ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २४, २०७५ समय: ७:०९:४७
ईटहरी/ एक बेलाको निक्कै लोकप्रिय गीत ‘साईली’को अहिले सम्म पनि चर्चा सकिएको छैन । कारण हो यसै गीतको कथामा रहेर निर्माण भएको फिल्म ‘साईली’ । जस्को पहिलो गीत सार्बजनिक भएको छ । गायक संगै फिल्म ‘साईलि’ को निर्माता समेत रहेका हेमन्त रानाको जन्मदिन पारेर ‘नाच माया’ बोलको गीत तथा भिडियो सार्बजनिक गरिएको हो । हेर्नुस् भिडियो ।
निर्माता तथा गायक हेमन्त कै स्वर रहेको गीतलाई आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरि सार्बजनिक गरिएको हो । गीतमा सुशान्त गौतमको सङ्गीत, हर्क साउँदको शब्द समाबेश गरिएको छ । सार्बजनिक गीतको भिडियोमा बिवाहको महौललाई रमाइलो शैलीमा देखाईएको छ । फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् ।
जिएच इन्टरटेनमेन्टको व्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा दयाहाङ, गौरव, मेनुका, केनिपाको अलावा माओत्से गुरुङ, प्रकाश घिमिरे, अरुणा कार्की लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । फिल्म साईलिलाई विशाल गुरुङ र मोहन राना मगरले निर्माण गरेका हुन भने बिजय अवाले, विकाश पुजास, सुवेच्छा केसी सह निर्माता हुन । मणिराम पोखरेल कार्यकारी निर्माता हुन् भने सार्बजनिक गीतको भिडियोमा फिल्मका मुख्य कलाकार दयाहाङ राई, गौरव पहारी, मेनुका प्रधान, केनिपा सिंहले कम्मर मर्काएका छन् ।